लकडाउनले दैनिकी नै परिवर्तन भयो | thesouryamithila
लकडाउनले दैनिकी नै परिवर्तन भयो
🕛 बैशाख १०, १०:२२ AM
नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने उद्देश्यले लकडाउन लगाएको एक महिना भई सक्यो । कतिलाई यो लकडाउनले एकदमै पिरोलि रहेको छ । हुनत यो संक्रमण फैलिन नदिनका लागि यो लकडाउन तथा सामाजिक दुरी पालन गर्नु अपरिहार्य थियो । यद्यपि कति यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् जो लकडाउन तोड्न पछाडी हटि रहेका छैनन ।
यो लकडाउनले धेरैको दिनचर्या नै परिवर्तन गरि दिएको छ । तर मेरो दिनचर्यामा भने् कुनै प्रकारको भिन्नता आएको छैन । मात्र कहिलेकाही बाहिर घुम्न जाने बन्द गरेकी छु । म सधैँ आफ्नो घरमै बसेर अफिसको काम गर्छु । आमालाई सहयोगीको रुपमा जतिबेला पनि सक्रिय रहन्छु । बिहान ७ बजे सुतेर उठेपछि हाथमुख धोएर घरको कामकाज सकाएर आफ्नो अफिसको काम गर्न लागि पर्छु ।
लकडाउनकै कारण शिक्षण संस्थाहरु बन्द छन् । साथीहरु संगको भेटघाट बन्द भएको छ । कलेज बन्द भएका कारण किताब कापी यो लकडाउनको अवधिमा छोएको पनि छैन । किताब पल्टायो कि मलाई निद्रा लाग्ने बानी भई सकेको छ । यस्तो किन भएको होला कुनै ? यद्यपि यस अवधिमा म अहिले बिहान नुहाइधुवाइ गरेर आफ्नो काम सकाउछु । बिहान ९ बजेदेखि ६/७ बजेसम्म काममै व्यस्त हुन्छु । आजभोलि मलाई किताबी ज्ञान भन्दा फरक किसिमको ज्ञान लिनमा उत्सुकता जागेको छ ।
राति पढ्न बस्दा ठुलो भतिजो पनि संगै बस्छ । ऊ मलाई सोध्ने गर्छ दिदी जतिबेला म पढ्न बस्छु तपाई मोबाइल लिएर नै बस्नु हुन्छ किन ? हजुरलाई पढ्न रुचि लाग्दैन र ? उसको यो प्रश्नले मलाई अनुत्तरित बनाई दियो ? उसको यो प्रश्नले नजवाफ बनाए पनि उल्टै उसलाई नै आफ्नो गृहकार्य सका भने र हप्कार्छु ।
ऊ सुत्न गएपछि म डायरी पल्टाएर कविता लेख्न बसि हाल्छु । हो, मलाई अब कविता, रचना पढ्न लेख्न दुवै मन पर्छ । रुचि भन्ने कुरै त्यही हो कि कसैलाई केहीमा रुचि लागि हाल्छ । मलाई पहिलापहिला सानोसानो नानिहरुलाई मात्र पढाउन मन परथ्यो । तर अब मलाई हरेक क्षेत्रमा काम गर्न मनपर्छ । मलाई लाग्थ्यो एजुकेशन पढेर शिक्षक मात्र बन्न सकिन्छ । तर बल्ल थाहा पाएँ कि शिक्षा पढेर राजनीति , पत्रकारिता , समाजिक व्यवहारको कुरा पनि सिक्न सकिन्छ ।
मलाई राजनीतिक र पत्रकारितामा बुझ्नमा धेरै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो । बा आमा समझाउनु हुन्थ्यो कि एउटा किताब पढेर मात्र सफल व्यक्ति हुदैन सफल व्यक्ति हुनका लागि किताबी ज्ञानभन्दा राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, साँस्कृति, राष्टृ र अन्तर्राष्टिृय आदि सबै क्षेत्रमा जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । यो कुरा म बुझन सकिरहेको थिइन ।
यो लकडाउनले नै जुराएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ । यि सबका बिच म मोबाइलकै किरा भएको जस्तो लागि रहेको छ । मोबाइलमा साथीहरु संग कहिलेकाहीँ गफिन्छु भने कहिले काहि मोबाइलबाटै देश विदेशका समाचारहरु हेर्ने गर्छु ।
मोबाइलकै कारण अहिले समय व्यतित गर्न मलाई सहज भएको छ । हुनत लकडाउनका कारण कतिको आर्थिक अवस्था नै कमजोर बनाएको यथार्थलाई बिर्सिन सक्दैन । तर यस संगै हामीले यो कुरो पनि बिर्सिनु हुँदैन लकडाउन तपाई हामीको सुरक्षाकै लागि हो । फेरी यो सधैँका लागि पनि होइन । यसको पालना गर्नु नै अहिलेलाई बुद्धिमानी होला ।
Tags: दैनिकी परिर्वतन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपनि टिकटकमा
मिथिलाको महापर्व छठको तयारी लगभग पूरा (भिडिओ र फोटोहरु)
आज देखि विधिवत रुपमा छठ पर्व सुरु
प्रदेश २ मा ५९ संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या १५ हजार ५ सय ६२ पुग्यो
भारतीय सेनाध्यक्ष कात्तिक १९ गते नेपाल आउँदै
प्रदेश २ : १ लाख ३२ हजारको पिसिआर परीक्षण गर्दा १५ हजार भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
कोरोना संक्रमणबाट पूर्व संविधानसभा सदस्य चौधरीको निधन
सुशान्तको जन्मदिनमा दिदीले घोषणा गरिन् ३५ हजार डलरको छात्रवृत्रि कोष
बिहिबार थप ३ सय ३६ जनामा कोरोना पुष्टि
हत्या र लुटपाट गरेको ९ वर्षपछि एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा
जुलुसमा निर्धारित नारा मात्र लगाउन निर्देशिका
आइपुग्यो कोरोनाविरुद्धका खोप